Ọnụahịa nke OPPO Reno na Europe abanyeworị | Gam akporosis
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izu abụọ gara aga ka e nyere OPPO Reno na eze, na ihe omume na China. The ika hapụrụ anyị abụọ ụdị a nso, na Reno na Reindeer 5G. Nke a bụ ngosipụta nke ngwaọrụ abụọ na China, n'ihi na na njedebe nke ọnwa a ọzọ na-echere anyị na Europe, bụ onye ngosi ụbọchị ekpughe na nso nso a.
Ọ bụ ezie na obere obere anyị nwere nkọwa gbasara mmalite nke OPPO Reno ndị a na Europe. Ebe ọ bụ na ọ leaked ego na ekwentị ga-enwe nke na - enye aha ya na oke a mgbe ebidoro ya na Europe. Ọnụahịa na-enye anyị ohere inweta echiche nke atụmatụ a.
The OPPO Reno bụ a ama maka adịchaghị ufọt ufọt, dị ka anyị nwere ike ugbua ahụ si ya nkọwa. Ọ bụ ezie na ọnụahịa ekwentị bụ nkọwapụta ruo ugbu a bụ ihe omimi. Mana ugwo ohuru na-ahapụ anyị data ndị ọzọ na nke a. Ebe ọ bụ na ekwentị ga-abata na ọnụahịa banyere 499 euro.
Ọ bụ ọnụahịa dịtụ elu karịa ọtụtụ ekwentị gam akporo na nke a. Yabụ nke a bụ ihe nwere ike inwe mmetụta na arụmọrụ nke ekwentị na ahịa. Ihe nwere ike imebila ụlọ ọrụ ahụ, nke na-achọ inweta ebe na Europe na ekwentị ndị a.
Ọzọkwa, ụlọ ọrụ akagbuola otu n'ime usoro ya. Otu n'ihi na ha chọrọ gbado anya na mbọ ndị a OPPO Reno. Ya mere, ọ bụkwa ihe ize ndụ nke a ghaghị iburu n'uche. Ebe ọ bụ na ọnụahịa dị oke elu na ekwentị ndị a bụ ihe na-agaghị enyere ha aka nke ukwuu inweta ụkwụ na Europe.
Ọnụahịa a bụ asịrị. Ya mere, anyị ga-echere ụbọchị ole na ole, rue Eprel 24. Mgbe ahụ anyị nwere ike ịmata ma ọnụahịa nke OPPO Reno a bụ n'ezie euro 499 ndị a ma ọ bụ na ọ bụghị. Anyị na-atụ anya ịmara ọnụahịa nke ekwentị 5G, nke ga-abụ ihe ga-efu oke ọnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Edere ọnụahịa nke OPPO Reno na Europe